Any Shina, Tsy Tapakila Volamena Hidirana Eo Amin’ny Sehatry Ny Asa Foana Akory Ny Diplôma Avy Eny Amin’ny Anjerimanontolo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2016 13:33 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Ελληνικά, Swahili, Français, English
Ireo Sinoa nahazo diplôma, mandritra ny fampirantiana mikasika ny asa, tamin'ny taona 2007. Sary avy amin'ny masoivohom-baovaom-panjakana Xinhua.
Indray mandreha indray, maherin'ny 7 tapitrisa indray ireo mpianatra nahazo diplôma avy amin'ny anjerimanontolo ao Shina tamin'ny volana May. Raha toa ka ampianao an'ireo 300.000 nahazo diplôma avy any ivelany izany, ary koa ireo nahazo diplôma tamin'ireo taona teo aloha izay mbola andalam-pitadiavana asa, midika izany fa maherin'ny 15 tapitrisa ireo tanora miara mikatsaka ny anjara asany amin'ity taona ity.
Amin'ny maha-hery vaovao ara-toekarena misondrotra azy, heverina ho manana tsenan'asa goavana i Shina. Noho izany, raha vao mitady amin'ny google ny hoe “mitady asa ao Shina” ianao, an-tapitrisany no valiny mitranga eo. Saingy ny zava-misy, maro ireo manana diplôma no sahirana vao mahita asa aorian'ny nahavitan'ny fianarany. Raha ny marina, misy fiteny malaza iray izay nipoitra nandritra ireo taona maro nifanesy, manohana ny hoe “ny fahazoana diplôma mira tsy fananan'asa.”
Ny taona 2013, 17,6 isan-jato ny tahan'ny tsy fananana asa ho an'ireo manana diplôma avy amin'ireo sekoly sy ireo anjerimanontolo, roa volana taorian'ny fahazoana maripahaizana, araka ny voalazan'ny Times Higher Education; ho an'ireo any amin'ny faritra ambanivohitra, 30,5 isan-jato izany. Avo kokoa izany raha mihoatra amin'ny tahan'ny tsy fananana asa amin'ny ankapobeny (na fara-fahakeliny amin'izay noheverina ho tahan'ny tsy fananana asa, satria tsy azo itokiana ny angona avy any Shina). Satria nihisatra ny toekaren'i Shina tato anatin'ny roa taona farany, vao mainka niharatsy ny olan'ny tsy fananana asa ho an'ireo manana diplôma.
Hita taratra amin'ireo hafatra miely be anaty media sosialy sy ireo hafatra amin'ny finday ny fahasorenan'ireo andian-taranaka tanora ao Shina, tahaka ireto manaraka ireto:
Raha vao teraka izahay, nisy poizina ny raikipohy tamin'ny rononon-jaza, rehefa nitombo indray ny vatanay, sakafo tsizarizary fotsiny no afaka nohaninay, rehefa tafitidtra tao amin'ny garabola izahay, tsy takatra ny saram-pianarana, rehefa nahazo ny diplôma teny amin'ny anjerimanontolo indray izahay, tsy an'asa, rehefa mba niezaka namelon-tena tamin'ny fampanjanaham-bola izahay, rava io; rehefa niezaka mafy mba ho raikipitia tamin'ireo tovolahy tsara tarehy rehetra izahay, pelaka no hita, rehefa niezaka nanenjika ny mahazatra izahay [kolontsaina sy soatoavina], efa nanjary tsy mahazatra intsony izy ireo.
Ny dikan'ny anjerimanontolo: toy ny fonja ny fitantanana, natokana ho an'ireo jiolahim-boto ny kalitao. [Ireo mpianatra] mianatra ny tokony ho fomba fanoroka imasom-bahoaka, mandany toy ireo madio vozon'akanjo, manonofy antoandro ao an-dakilasy. Mahazatra ny fandinganana kilasy, sahala amin'ny toerana fidirana amin'ny aterineto ireo efitrano fatoriana. Sahala amin'ny asa ny fakàna fanadinana, ireo itoeran'ny fahefàna sy ny vola sisa no afaka mandoa saram-pianarana. Mitovy amin'ny vokatry ny fikarohana Baidu ny fanohanana voka-pikarohana. Tsy misy mijery lavitra intsony ny rehetra. Sakafo natao hamahànana biby no sakafo ao amin'ny toeram-pisakafoanana an-tsekoly. Toy ny nofy ny fananana asa. Manana diplôma mira tsy an'asa. Ho an'ireo mpifindra-monina avy any ambanivohitra mankany an-drenivohitra ireo asa [azo atao] eny an-tsena.
Maro no mino fa mifamatotra tamin'ireo politika fanitàrana ny fampianarana tamin'ny ambaratonga ambony, nandritra ny taona 1999, ny ampahan'olana mikasika ny tsy fananana asa manjo ireo manana diplôma avy eny amin'ny anjerimanontolo. Tamin'izany fotoana, ny 35% n'ireo manana diplôma avy amin'ny sekoly lisea ihany no tafiditra teny amin'ny sekoly ambaratonga ambony, ireo sekoly ara-teknika sy ireo anjerimanontolo. Kanefa ny taona 2015, maherin'ny 80% izany, ary manodidina ny 40 isan-jato no no mety ho tafiditra amin'ireo taona voalohany any amin'ireo anjerimanontolo. Ho an'ireo tanàndehibe toa an'i Beijing, maherin'ny 70% ny isan'ireo mpianatra miditra amin'ny anjerimanontolo.
Milaza ny sasany fa tsy misy asa ampy ho an'ireo olona marobe nandranto fianarana avy eny amin'ny anjerimanontolo. Ao amin'ny media sosialy malaza Weibo, nitsikera ny fitobahan'ireo nahazo diplôma i Lydia:
Eny rehetra eny ireo manana diplôma, ary tsy misy ilàna azy ireo mpianatra avy amin'ny kolejy ankehitriny. Ahoana no hafahanao milaza ny fahasamihafany?
Mpampiasa Web iray hafa, “Nomadic hero”, nanoratra fa ny vokatra tsy niriana ateraky ny fanitarana dia ny fidinan'ny kalitaon’ ireo manana diplôma amin'ny ankapobeny:
Tsara ny tolona atao hisian'ny rariny ara-panabeazana mba hiantohana ny fahafahana mandeha an-tsekoly ho an'ny ankamaroan'ny olona. Saingy marina fa miharatsy ny kalitaon'ireo mpianatra. Ny anjerimanontolo, fa tsy ireo mpianatra akory, no very ny hasiny.
Nitaraina i “Ling Yan San Chi” fa:
Efa ho taona roa sahady no nahazoako diplôma, saingy mbola miketrika ny hoe ahoana no hahitana asa!! Nahoana ny fiainako no dia fadiranovana?
Na sarotra aza ny mahita asa, maro no mbola mieritreritra ny fidirana eny amin'ny anjerimanontolo ho ny làlana tsara indrindra mba hahazoana ireo fahaizana manokana sy hiakarana ny dingana ara-tsosialy – vokatr'izay, tsy mahatsiaro ho manenina tamin'ny safidiny izy ireo. Nisafidy ny hanohy ireo fianarany eny amin'ny ambaratonga fahatelo aza i “HaiDe XiaTian”:
Mahatsiaro manenina aho [mikasika ny fanarahana ny fanabeazana ambony], nefa tsy misy làlana hafa, ka tsy maintsy nanaraka io làlana io. Antoka farany ho ahy ny fandehanana amin'ny sekoly ambaratonga fahatelo mba hidirana aminà anjerimanontolo tonga lafatra:
Fanombohana no hiantsoana ny lanonana fanolorana maripahaizana, izay tokony hoe teboka vaovao fiainhàna ho an'ireo vao nahazo diplaoma, saingy maro no mahita an'io ho toy ny adin'ny tsirairay, toa an'i UsedToBe5 mpampiasa Weibo:
Zava-tsarotra ny fahitana asa satria tsy maintsy lavo foana ianao ary sasatry ny miarina isaky ny mihetsika. Mazava ho azy, tsy manome tsiny na iza na iza aho satria ahy ny safidy.
Tsy ny rehatra akory no mivalaketraka amin'io tedraharaha io. Ny tenifototra iray ao amin'ny Weibo hoe #manana diplôma tsy midika ho tsy an'asa#, no manome hevitra tsara ho an'ilay resaka, ary miezaka ny manolotra fanohanana ireo hafatra, torohevitra sy ireo traikefa manokana.
Avy tamin'ny mpampiasa Weibo “Wanan Xin XinYu” tamin'ny 12 Jolay teo ny sata farany miaraka amin'ilay tenifototra etsy ambony:
Hiatrika tafatafa iray hafa aho androany, ary manantena hanomboka hiasa rahampitso. Manampoka menaka ny #fanànana diplaona tsy midika ho tsy fananana asa# [fehezanteny iray mampahery]! Na dia tsy an'asa efa ho iray volana aza aho.
iray monja amin'ireo 7 tapitrisa nahazo diplôma tamin'ny 2016 i WanAn Xin XinYu.